ब्रिजकोर्स आवश्यक कि अनावश्यक ?
सामान्यतय एउटा र अर्को तहबीच रहेको भिन्नतालाई जोड्न तयार बनाइएको छोटो अवधिको पाठ्यक्रम नै ब्रिजकोर्स हो । यो तह अनुसार फरक फरक अवधिको हुने गर्दछ । यसले विद्यार्थीलाई अगाडिको तहको बारेमा जानकारी दिनुका साथै मानसिक रूपमा माथिल्लो तहको बारेमा तयार बनाउने कार्य गर्दछ । ब्रिजकोर्स मुख्यगरी सबै तहमा हुनु आवश्यक छ । एउटा तह पुरा गरेर […]
स्याउ खेती गर्ने तरिका
स्याउ खानुका स्वास्थ्य फाइदाहरू अनगिन्ती छन्। स्वस्थ फाइबर, भिटामीन अनि कार्बोहाइड्रेटले भरिएको स्याउ दैनिक सेवन गर्न विश्वका सबै चिकित्सकहरू सल्लाह दिन्छन्। भोक लागेको बेलामा पनि स्याउ खाँदा केहि बेरको लागि भएपनि भोकलाई टाढा राख्दछ। तथापी, सबै खानेकुराजस्तै स्याउ पनि धेरै खाएमा फाइदा भन्दा बेफाइदा गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । स्याउ खेती गर्दा अपनाउनुपर्ने केहि कुराहरु : स्याउ […]
अनार(दारिम) खेती गर्ने तरिका
अनार एक वहुवर्षिय, वहुउपयोगि पुनीकेसि(एगलष्अबअभबभ)परिवार अन्तरगतको फल हो । यो अति उपयोगि पौष्टिक तत्वयुक्त फलफूल मानिन्छ । विश्वका विभिन्न उष्ण तथा उपोष्ण प्रदेशिय देशहरुमा अनारको व्यवसायिक खेती हुदै आएको पाईन्छ । युरोपको स्पेन, अफ्रिकाको मोरक्को, ईजिप्ट, एशियाको अफगानिस्थान वेलाचिस्थान,चीन, जापान, तथा संयूक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा व्यवसायिक रुपमा खेती गरेको पाईन्छ । यस्को इतिहाँसलाई हेर्दा अनारको उत्तपत्ति इरानमा […]
बाख्रा पाल्ने तरिका
बाख्रा एक प्रकारको स्तनधारी वर्गमा पर्ने घरपालुवा जनावर हो। बाख्रा बोभिड (Bovidae) परिवार अन्तर्गत पर्छन र यिनीहरू भेडाहरू सँग मिल्दाजुल्दा हुन्छन, यि दुबै क्याप्रिनेइ (Caprinae) सह-परिवार अन्तर्गत पर्दछन। बाख्रा पाल्तु जनावरहरू मध्ये धेरै उपयोगी मानिन्छ। बाख्रालाई मासु, दुध, ऊन र मलको लागी धेरै जसो किसानहरूले बाख्रा पालन गरेको पाइन्छ। बाख्राहरू विभिन्न प्रजातीको हुन्छन्।खरी, औले, तराई र सिन्हाल नेपालका रैथाने बाख्रा हुन्।नेपाल वाहिर का आयातित जात हरु मा जमुनापारि, बारबारी, […]
नास्पाती खेती गर्ने तरिका
नास्पाती वा नासपाती (nashi pear), नेपालमा पाइने एक किसिमको फल हो। यसको उदगम पूर्वी एसिया मानिएको छ| नेपाली नाम नास्पाती ‘जापानी’ नाम बाट आयात गरिएको विश्वास गरिन्छ| नास्पाती (Pyrus pyrifolia/ Pear)कस्तो किसिमको हावापानीमा फस्टाउने फलफूल वाली हो ? यो एक समशितोष्ण पतझड फलफूल हो । यसका खेती चिसो आद्र कम भएको ठाउँहरुमा बढी फस्टाउछ गुणस्तरीय फल […]
मेवा खेती गर्ने तरिका
मेवा क्यारिकेसी परिवारमा पर्ने एक प्रकारको फल हो। अन्य फलफूलको तुलनामा मेवा निकै स्वस्थ फल मानिन्छ। यो फल पेट तथा मुटु दुबैको लागि निकै लाभदायी हुन्छ। यो बजारमा सहज रुपमा पाइने र गाउँघरमा पनि सहजै फलाउन सकिने सस्तो फल पनि होे । मेवा देख्न र खानमा जति मीठो हुन्छ यो त्यत्तिकै गुणकारी पनि हुन्छ। छालाका लागि मेवा छालाका […]
बूटेबल पेन ड्राइव बनाएर विन्डोज अपरेटिङग सिस्टम ईन्स्टल गर्नुहोस्
यदि तपाईं विन्डोज ईन्टरनेट बाट डाउनलोड गर्नु हुन्छ भने प्राय तपाईंलाई त्यो .iso फरम्याटमा उपलब्ध हुन्छ । जसलाई तपाईंले सि.डि वा डि.भि.डि मा बर्न गरेर त्यस बाट आफ्नो कम्प्युटरमा अपरेटिङग सिस्टम Install गर्नु हुन्छ । सि.डि वा डि.भि.डि बनाएर कम्प्युटरमा अपरेटिङग सिस्टम Install गर्दा कहिले काही सि.डि स्क्र्याच भएर install गर्नमा समस्या आउन सक्छ अथवा […]
नेट सर्फिङग गर्दा सतर्क रहनुहोस्
आज भोली ईन्टरनेट सर्फिङग गर्न सबैलाई मन पर्छ । यो अहिलेको समयमा अपरिहार्य जस्तै बनि सकेको कुरा नकार्न सकिदैन । एक दिन नेटमा बसिएन भने पुरा संसार सँग सम्बन्ध छुटेको झै भान हुन थाल्दछ । यसरी हेर्दा ईन्टरनेट धेरैको लागि आवश्यक्ता नै बनी सकेको छ । तर धेरै जसो मान्छेहरुको यो भनाइ छ कि उनिहरुलाई […]
चिया खेती गर्ने तरिका
नेपालमा विशेषतः ३ प्रजातिको चिया खेती गरिन्छ । आसामी (Camelia asamica ) र कम्बोडियाली (Camelia asamica spp lasiocalyx) प्रजातिको चिया सिटिसी चिया उत्पादनको लागि प्रयोग हुन्छ भने चिनिया प्रजातिको चिया (Camellia sinesis) मुख्यतया अर्थोडक्स चियाको उत्पादनमा प्रयोग हुन्छ । चिया पारखीहरूका अनुसार नेपाली अर्थोडक्स चियाको गुण, बास्ना तथा स्वाद करिव करिव विश्वप्रसिद्ध दार्जिलिङ चियाकै जस्तो छ । दार्जिलिङकै […]
सुन्तला खेती गर्ने तरिका
सुन्तला नेपालमा पाइने एक प्रकारको फल हो । यसको बोट ५ देखि ८ फीटसम्म अग्लो हुन्छ। यो पतझड वर्गको वनस्पति हो। यसको बोटमा तीखो काँडा हुने गर्दछ । सुन्तलामा भिटामिन ‘ए’, ‘बी’, फलाम र पोटेसियमसमेत बढी मात्रामा हुन्छ । भिटामिन ‘ए’ र क्याल्सियमले ओतप्रोत सुन्तला को नियमित सेवनले दाँत र हाडको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । यसले अस्टियोस्पोरोसिसको […]
कहिले हुन्छ त काठमाण्डौ धुँवाधुलो मुक्त सहर
नेपालको राजधानी काठमाण्डौ हो । जहाँ लाखौं मानिसहरु बसोबास गर्छन् । सुन्दा जति राम्रो र ठुलो सहर छ । त्यो भन्दा काठमाण्डौ फरक खालको रहेको छ । सबैकुराहरुले पूर्ण भएपनि काठमाण्डौको सडक हेर्ने हो भने र यात्रा गर्ने हो भने, निकै कठिनाई रहेको छ । नेपाली जनताहरु धुँवाधुलोदेखि लिएर दुर्गन्धित सडकहरुमा यात्रा गर्न वाध्य भएका […]
धेरै मानिसहरू लसुनको गन्धको कारण र यसको कडा स्वाद मनपराउँदैनन्। तर यो कुरा गलत हो । लसुन गुणहरू को एक भण्डार हो। यसमा एन्टी- अक्साइड गुणहरू छन् जुन हाम्रो पेटको लागि सबैभन्दा आवश्यक र लाभकारी हुन्छ। यदि हामी बिहानको खाली पेट यसको उपयोग गर्छौं भने, हामी कहिल्यै पेटसँगको कुनै समस्यामा पर्दैनौ । जस्तै, बवासीर, कब्ज, […]
बालश्रम विरुद्धको दिवस औपचारिक कार्यक्रमै सीमित
प्रत्येक वर्ष जुन १२ तारिकका दिन विश्वभरनै विभिन्न बालश्रम विरुद्धको दिवसको मनाइने गरिन्छ । यसवर्ष पनि बालश्रमको प्रयोग नगरौं, युवा रोजगारको प्रवर्द्धन गरौं भन्ने मूल नारा सहित यो दिवस मनाइदैछ । शारीरिक वा मानसिक रुपले परिपक्व व्यक्तिले गर्ने काम श्रम हो भने बालबालिका वा अपरिपक्व उमेरका व्यक्तिले गरेको कामनै बालश्रम हो । हाम्रो देशको परिवेशमा […]
पहाडदेखि तराईसम्म गर्न सकिन्छ कागती खेती
कागती यस्तो फल हो जुन समुन्द्रि सतहवाट १०० मीटरदेखि १८०० मीटर उचाईसम्म खेति गर्न सकिन्छ । कागतीको रसमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले स्वास्थ्यको लागी अत्यन्तै महत्वपूर्ण फल हो । अपच एवं पेटको सबै जसो विकारहरु निष्काशन गर्न यो फल निकै उपयोगी हुन्छ । कागती खेती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केहि मुख्य जानकारी यस्ता छन् […]
रुवाउँने प्याजको फाइदा थाहा पाऔं
प्याजको गन्ध कतिलाई मन पर्दैन सोधिरहनु नपर्ला । गाडीमा वा कतै कसैको मुखबाट ह्वास्स निस्कने प्याजको गन्ध सबैका लागि अप्रिय नै हुन्छ । ‘मुला खाई वन पस’ भने जत्तिको निषेध प्याजमा नगरिने भएपनि खाएपछि गन्धको कारण प्राय प्याजलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा अघोषित निषेध नै छ भने पनि फरक पर्दैन । खाएपछि मात्र नभएर खानलाई प्याज काट्नु […]
कहिले होला हाम्रो शिक्षाको सम्मान सरकार
हामी लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर पढिरहेका हुन्छौं । हाम्रो वावा-आमाले रातदिन घास-दाउरा गर्दै गाउँमा घामपानी नभनीकन खसी पालेर हुन्छ कि गाई भैंसीको घीउ बेचेर हुन्छ । जसोतसो छोराछोरीलाई पढाइरहेका हुन्छन् । गाउँको त्यो भीरपाखा नभनीकन एक्लै काम गर्दै छोराछोरीले पढेर केहि गर्लान् कि भन्दै पढाउन घर भन्दा बाहिर कोठा भाडा तिर्दै राखेका हुन्छन् । जसोतसो […]
पर्वते(नेपाली) भाषाको इतिहास
नेपाली भाषा आर्य-भारोपेली समुहको भाषा हो जुन नेपाल लगायत भारत, भुटान र बर्माको केहि भागमा बोलिन्छ । यो भाषा नेपाल र सिक्किम (भारत) को आधिकारीक (सरकारी काम काजको) भाषा हो । नेपालका करीव आधा जनसंख्याले आफ्नो मातृभाषाको रूपमा यो भाषा बोल्ने गर्दछन् । नेपाली भाषा बिभिन्न समयमा बिभिन्न नामले चिनिन्थ्यो । खस कुरा, पर्वते भाषा […]
किन असफल हुन्छ प्रेम सम्बन्ध ?
मानिस यो धर्तीमा जन्मिसकेपछि जीवनयापन गर्नको लागि र यो समाजमा जिउनको लागि विभिन्न क्षेत्रको उतिकै सहयोग र साथको आवश्यक हुन्छ । जस्तै सर्वप्रथम त खाद्यान्न सबैभन्दा धेरै जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक हुन्छ । त्यस्तैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारदेखि लिएर माया, ममता, स्नेह, साथ र सहयोगको पनि त्यतिकै भूमिका रहेको हुन्छ । यो स्वार्थी संसारमा दुईदिनसम्म जिउनको […]
शिक्षा सरोकार : अब विकेन्द्रित शिक्षा कस्तो आवश्यक छ ?
विश्वव्यापी रुपमा नैसर्गिक मानवअधिकारको सवाल रहेको गुणस्तरीय, समावेशी, समतामूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा आजको आवश्यकता बनेको छ । राज्यले संविधानतः शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्थापीत गरी आधारभूत तह अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मै निशुल्क शिक्षाको प्रावधान उल्लेख गरेको छ । तर पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता भने पाउन सकिएको अवस्था छैन । मुलुक संघिय संरचनामा रुपान्तरण हुने क्रमसंगै शिक्षामा […]
श्रमिक दिवस मनाइँदैमा मजदुरले पाउँलान् त उचित पारिश्रमिक
आज १२९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमगरी मनाइएको छ । देशभरका श्रमजीविहरु श्रमिक दिवस मनाउनलाई व्यस्त छन् । अझै हेर्ने हो भने हाम्रो देशका राजनीतिक दलका पार्टीका प्रतिनिधिहरु वढीमात्रामा विभिन्न कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गर्दै श्रमिक दिवसको वारेमा भाषण गर्न व्यस्त छन् । जतिसुकै भाषण गरेता पनि मजदुरहरुले उचित पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । […]
बाँकेका ८ जनासहित थप १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
३ मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी : यी हुन् सम्भावित नयाँ मन्त्रीहरु